Ogaden News Agency (ONA) – Dhagaxbuur oo shacabkii daganaa la’isugu keenay meel iyo warar kaloo dheeraad ah
Dhagaxbuur oo shacabkii daganaa la’isugu keenay meel iyo warar kaloo dheeraad ah
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Dhagaxbuur waxay sheegayaan in maanta saacada markay ahayd 11:00 Duhurnimo lagu amray dhamaan dadkii daganaa magaalada Dhagaxbuur inay isugu soo baxaan meel dadka ay ku shiriyaan, halkaasoo lagu hayay ilaa 5tii galabanimo, markii dambena lagala hadhay 11 qof oo ciidamada ay kaxaysteen.
Arintan ayaa ka dambaysay siday noo sheegeem xubnaha nooga soo waramay ka dib markii la ogaaday inay CWXO soo galeen magaalada laba habeen oo ka horeysay. Arintan ayaa waxay walwal xoogan ku abuurtay ciidamada gumaysiga iyadoo todobaadkii hore ay cutub ka tirsan Qaybta Gorgor ku qaaderen dagaal xoogan Jigjiga oo ah magaala madaxda maamulka gumaysiga u jooga Ogadenya.
Wareysiyo aan la yeelnay dad reer Jigjigaad ah oon arinta dagaalkaa wax ka weydiinay ayaa noo sheegay inuu dagaalka ka bilowday xera dhiigta ka dibna uu ku faafay magaalada. Waxaa kaloy noo sheegeen inuu Cabdi iley amray in la qariyo xogta dagaalka oo loo saaray rasaastii dhacaysay ee magaalada oo idil qabsatay inuu ahaa dagaal ka dhex dhecay dad shacab ah iyo qaar rabshado ka waday magaalada, waxaana qaar badan oo ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee xaafadahaa daganaa la dhigay xabsiyada.
Wararka kaloo hordhac ah oo naga soo gaadhay gudaha Ogadenya ayaa sheegaya in laba dagaaloo xoogan uu ka dhacay degmada Baabili iyo hareeraheeda. Dagaaladaa ayaan faafaahintooda ka sugaynaa xarunta dhexee jabhadda.
Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadeya ayaa todobaadyadii la soo dhaafay digniina badan gaadhsiinayay dadka shacabka ah ee magaalooyinka dagan lagula socodsiinayo isbadalada uu qaatay dagaalka gobanimadoon.